Hormuud News Wednesday, April 25th, 2018 | 14:08
[Friday, February 22nd, 13] :: Wasiir Duur Oo Ka Hadlay Hawlgallo Boolisku Dad ku qabqabteen, Baaq Culus-na U Diray Culimada Somaliland
Hargeysa(RH):- Wasiirka Wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Carraale (Duur), oo uu weheliyo Taliyaha Booliska Sarreeye Guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan, ayaa markii ugu horreysay shalay faahfaahin ka bixiyey hawlgallo ay Ciidammada ammaanku habeennadii u dambeeyey si is-daba-joog ah uga wadeen magaalooyinka waaweyn ee dalka, kuwaasoo lagu qabqabtay dad aad u badan oo lala xidhiidhinayo argagixiso.
Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Nuur Carraale (Duur) oo ka hadlay shir jaraa’id oo ay Taliyaha Booliska si wada-jir ah ugu qabteen Xafiiskiisa magaalada Hargeysa galabta, waxa uu baaq culus u soo jeediyey Cilmada waaweyn ee reer Somaliland oo uu ka dalbaday inay dadka iyo ciidanka ammaanka u sheegaan argagixisada iyo cidda diinta si qaldan u adeegsanaysa.
Wasiirku waxa uu sheegay in Ciidammada Aammaanku ay xididdada u siibeen cabsida ay abuurtay Warbixin ay dawladaha Ingiriiska iyo Maraykanku ka soo saareen nabadgelyada Somaliland, isla markaana ugu baaqeen muwaaddiniintoodu inay ka baxaan Somaliland, kuwa u safrayaana ka joogsadaan. Wasiir Duur waxa kale oo uu sheegay inay Ciidammada Boolisku hawlgallada ay wadeen ku qabqabteen dad tiro badan oo argagixiso lala xidhiidhinayo, qaarkoodna qiraal yihiin kuwo kalena la baadhayo, waxaanu Wasiirku xusay in dad Muwaaddiniin ah oo aan waxba galabsan la sii-daayey, baadhitaanka ka dibna cidda wax lagu waayo la siiddeyn doono.
“Waqti ayaa ka soo wareegay markii dawladaha waaweyn ee Ingiriiska iyo Maraykanku ay dadkooda uga baqeen Somaliland, iyaga oo ka codsaday inaanay dadkoodu u soo safrin, inta joogaana ay ka baxaan, runtii waxaynu muujinaynaa iyadoo wakhti dheeri ka soo wareegtay cidda tagtayna ay yar tahay ama aanay jirin in amnigu sugan yahay, wax dhacay aanu jirin, Afduub aanu dhicin, cidna aan waxba la yeelin, iyada oo aynu ognahay waxa deriskeenna iyo hareereheenna ka dhacaya, Illaahay baynu ku mahadinaynaa.” ayuu yidhi Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland.
Wasiirku waxa uu sheegay marka uu yimaaddo Hay’adaha ammaanka war kasta oo u yimaadda inaan la fududaysan doonin hadduu run yahay iyo haddii uu been yahay-ba. Waxaanu Wasiirku ka hadlay hawlgallo baadhitaanno iyo qabqabasho isugu jira oo ay Ciidammada ammaanku habeennadii u dambeeyey ay ka wadeen magaalooyinka kala duwan ee dalka Caasimaddu ha ugu badnaatee.
Wasiir Duur oo hawlgallada habeennadan socday iyo waxay daarranaayeen waxa uu yidhi; “Waxaannu shacabka halkan uga sheegaynaa habeennadan waxa socday hawlgallo aad u adag iyo maalmihii laga soo bilaabo taariikhdaa sugan hawlgalladii jiray waa la laban-laabay ama waa la xoojiyey baan odhan karaa. Markaa, hawlgallo adag baa jiray, hawlgalladaasi waxaan odhan karaa shacabka saamayn bay ku leeyihiin, baadhitaanno xoog ah baa dhacay, waxa dhacay dad badan oo la qabqabtay oo gacanta Ciidammada amniga ku jira oo goobo kala duwan oo dalka ah lagu qabtay illaa Laascaanood illaa magaalada Hargeysa.”
Wasiir Duur oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi; “Markaa, kolley shacabu wey dareemayaan culayskaa, baadhitaankaa iyo qabqabashadaa. Laba dhinacba wey ka dareemayaanoo qof kasta oo soconayey magaalooyinka oo dhan wuu dareemay, waxa kale oo dareemay dadka agtooda cid laga qabqabanayey ama halla raaciyo ama dhibaataba haka soo gaadhee. Markaa, waxaannu leenahay dadweyneheenna sharafta leh ee nabadda ilaashada nabaddana jecel, inaanay wax dhibaato ahi jirin ee ay hawlahaasi yihiin hawlo nabadgelyada lagu dhiirrigelinayo oo lagu adkaynayo. Markaa, waxaan leeyahay shacabku ha u dul-qaataan wixii nabadda lagu sugaayo, maaha xumaan loole jeedo shacabka, maaha wax cid gaar ah lagu duulayo ee waa hawlgallo ammaanka lagu sugayo. Dhibta Shacabka oo keliyi ma qabo ee waxa la qaba Askariga habeen iyo maalinba bacadka iyo dhaxanta u taagan sugidda nabadgelyada.”
Mar uu Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Carraale (Duur), waxaa uu sheegay in hawlgallada nabadgelyada lagu sugayo ee ay Ciidammada Boolisku wadaan ay dhibaatooyin ka soo gaadheen dad Mudaaddiniin ah oo shacab, isla markaana dadka la qabqabtay intii aan dembi lahayn la siideyn doono, waxaanu yidhi; “Dadkii la qabqabtay ciddii aan waxba geysan waa la sii deynayaa, wixii la raadinayey ee raadkooda lagu daba-joogo baadhitaan baa u bilaabmaya iyaga. Markaa, Waxa dhacday dad Muwaaddiniin ah oo gacanta Booliska galay, laakiin illaa haddaba qaarkood la siidaayey oo siiddeynti ay bilaabantay, waana la siideynayaa, markaa dadkaasi ha dul-qaataan. Kuwa kale baadhis baa socota, dad aad u badan baa la qabqabtay oo qaar qiraal yihiin inay wax geysteen ama Somaliland haka geystaan ama meel kale haka geystaane.” Wasiirka arrimaha guduhu waxa uu sheegay inay ka cudur-daaranayaan qalad kasta oo dhacay intii lagu guda-jiray hawlgallada ay Ciidammada ammaanku wadeen habeenkan u dambeeyey. Waxaanu Shacabka reer Somaliland uga mahad-celiyey gacan-siin uu sheegay inay isla-garabtaageen shacabku Ciidammada ammaanka.
“Nuxurka aannu u dan lahayn waxa weeye in nabadgelyada la sugo. Waxaa xididdada loo saaray dhammaan cabsidii ka soo yeedhaysay ama sababtay inay dawladahaasi dhawaaqaas soo saaraan, ka dib markay soo gudbiyeen, xididdada ayaa loo saaray, waxa la isla gartay cabsidaasi maanta inaanay mid jirta ahayn, xog kale oo timaaddo mooyaane xogtii hore dhammaan xididdada ayey ciidammada amnigu u sii-been iyagana waan uga mahad-naqayaa hawlgalkaa ballaadhan ee ay sameeyeen. Markaa, hadda waxaynu sugnaa waxa weeye dawladda ama Xafiiska arrimaha dibedda ee Ingiriiska oo markii hore dhawaaqan soo saaray. Markaa, waxaan odhan karaa Illaahay mahaddii meel wanaagsan baannu wax soo gaadhsiinnay.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Carraale (Duur), waxaanu Shacabka ugu baaqay inay kordhiyaan taageerada ay siiyaan Ciidammada Nabadgelyada.
Wasiir Duur waxa uu cambaareeyey dilalka qorshaysan ee ay kooxaha xag-jirka ahi ku khaarajiyaan Culimada waaweyn ee Diinta, dilalkaas oo uu sheegay inaanay weli Somaliland ka dhicin, balse ay ka dhacaan Soomaaliya iyo Puntland, kuwaasoo uu ku tilmaamay falal wixiishnimo ah. Waxaanu sidaa daraaddeed baaq u soo jeediyey Cilimada Diinta Islaamka ee reer Somaliland, waxaanu yidhi; “Waxa Culimada soo gaadhay Somaliland kamay dhicine in Raggii waaweynaa ee Culimada ahaa agteenna lagu dilo. Masiibada agteenna ka dhacaysaa maaha mid innaga fog, laakiin Illaahay mahaddii waanay inna soo gaadhin. Markaa, waxa weeye taxaddirkeeda inaynu yeelanno, annaga oo ka xun, annaga oo u tacsiyadaynayna.”
“Markaa, Culimada waxaan ugu baaqayaa inay si geesinnimo leh uga hadlaan ee aanay qarsan masiibada ay leedahay argagixisadu, ee aan cidna u tudhayn ee aan Culimo daynayn, ee Masuul daynayn, ee aan, ee aan qof xil haya daynayn ee aan qof shacab ah daynayn ee aan qof Ajaanib ah daynayn. Waxay u baahantay wakhtigii laga badheedhi lahaa ee ay Culimadu tilmaami lahaayeen, ee ay Ciidammada ammaanka u tilmaami lahaayeen wax kasta oo qallooc ah ee jira iyo qof kasta oo ay arkaan inuu u wado Diinta Islaamka sidii Illaahay Diinta innoogu soo dejiyey, qof kasta oo dhalinyarada iyo shacabka ku faafinaya fikir qalloon waa wakhtigay Culimadu ka badheedhi lahaayeen ee ay ka digi lahaayeen, waa wakhtigay cabsida iska dhaafi lahaayeen ee ay ka badheedhi lahaayeen, waayo? Nabadgelyadoodii baa khatar ku jirta. Waxay nabadgelyo-darrada maanta ula mid yihiin Culimadii waaweynayd ee ay ahayd in la cisiiyo si ka duwan ama si la mid ah sida ay dadka kale uga cabsi qabaan ama ay adduunyaduba uga cabsi qabto ama way uga cabsi badan yihiin maaddaama oo ay iyagu uga dhaw yihiin, markaa waxaan odhan lahaa dhibtaa iyaga oo wada jir ah Shacabka hakala hadlaan.”
“Maanta nabad baynu haysannaa, wax kasta oo aynu maanta Illaahay ku mahadinaynaa dawladnimada, kala-dambaynta iyo horumarka intuba nabadgelyada ayey ku jiraan, nabaddaas maanta cadawga ugu weyn ee looga cabsi qabaa maaha shacabka ee waxa looga cabsi qabaa nabadgelyo-darro argagixiso ka imanaysa, waa nabadgelyo-darro ka imanaysa waxaan la garanayn oo aan muuqooda la aqoon oo cabsi weyn ku haya ummadda, ta keentay in dadkii aynu wada-shaqaynaynay ay ka cararaan Somaliland waa taas. Markaa, waxay u baahan tahay inaynu u eegno si ka duwan sida aynu u eegno waxyaabaha kala duwan ee dhexdeenna, waxa dhexdeenna oo dhami way innoo baryi karaan oo way inna sugi karaan, dib baanaynu u dhigan karnaa. Waxaanan ugu baaqayaa Warbaahinta iyo Siyaasiyiinta markay wax yimaaddaan yaan la buunbuunin.”
Waxa uu soo jeediyey Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Carraale (Duur), in danta Qaranka, wada-jirka, midnimada, adkaynta nabadgelyada iyo ilaalinta sumcadda iyo jiritaanka Somaliland loo midoobo shacab, dawlad, mucaarid, muxaafid iyo Saxaafad-ba.
Sidoo kale, Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Sarreeye Guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan, oo shirkaa jaraa’id ka hadlay ayaa isaguna sheegay in hawl-gallo ay Ciidammada Booliska iyo kuwa kale ee ammaanka oo isgarabsanayaa ay ka fuliyeen magaalooyinka Hargeysa iyo Laascaanood ay ku soo qab-qabteen dad badan oo uu tilmaamay inay tuhunno argagixiso galeen.
Waxaanu Taliyaha oo hawlgalladaa ka hadlayaa yidhi; “Ciidammadda Booliska iyo Kuwa kale ee ammaanku waxay beryahanba ugu ku gudo jireen hawl-galo aad u waaweyn oo aad uga adag kuwii hore oo laga fuliyay Laascaanood iyo Hargeysa, waxaan ka codsanaynaa dadweynaha Somaliland inay sii kordhiyaan taageeradda ay ciidammadda amniga la garab taagan yihiin. Tiro dad ah ayaanu ka qabanay Caasimadda Hargeysa iyo Gobolka Sool, baadhistoodiina way noo socotaa, waxaanan u mahad celinaynayaa dadweynaha iyo ciidammadda ammaanka ee hawl-galadan ka shaqeeyay.”
Waa markii ugu horreysay ee ay Wasiirka arrimaha gudaha iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland ka hadlaan hawlgallada baaxadda leh ee ay Ciidammada Ammaanku habeennadii u dambeeyey ka wadeen magaalooyinka kala duwan ee dalka oo dad badan lagu qabqabtay sida iyaguba ay sheegeen, hawlgalladaas oo ay dadweynuhu aad wax isaga weydiinayeen, gaar ahaan Bulshada ku dhaqan Caasimadda Hargeysa.